Wararkii ugundambeeyey dagaal khasaaro geystay oo ka dhacay Muqdisho. | Warbaahinta Ayaamaha
Wararkii ugundambeeyey dagaal khasaaro geystay oo ka dhacay Muqdisho.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Wararka naga soo gaaraya degmada Deyniile ayaa waxaa uu sheegayaa in halkaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay Ciidamo kala taabacsan Guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Deyniile ee Gobolka Banaadir iyo Guddoomiyaha Waaxda xaafadda Daaru-salaam dhinaca xiga degmadaas ayaa Maanta waxaa uu ka dhacay gudaha Degmadaas.
Daagaalka ayaa sida la sheegay waxaa uu salka ku haaya arrimo la xiriira muran dhul la isku heysto, waxaana dagaalka inta uu socday dadka degaanka Deyniile ay maqlayeen dhawaqa rasaas xoogan.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Laamaha ammaanka iyo maamulka degmada deyniile ee Gobolkaan Banaadir oo ku aadan dagaalkii khasaaraha dhaliyey ee maanta ka dhacay Degmadaas.